Hello Nepal News » रोनाल्डोको युभेन्टस भविष्यमा नयाँ मोड : क्लबका निर्देशकद्वारा च्याप्टर क्लोज !
रोनाल्डोको युभेन्टस भविष्यमा नयाँ मोड : क्लबका निर्देशकद्वारा च्याप्टर क्लोज !
एजेन्सी, चैत ९
इटालियन क्लब युभेन्टसका प्रमुख खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको भविष्य इटालीमा अनिश्चित बन्दै गएको चर्चा छ । गत राति युभेन्टस सिरी ए लिगमा आफ्नै मैदानमा १६औं स्थानको बेनेभेन्टोसँग पराजित भएपछि त रोनाल्डोको युभेन्टस भविष्य झनै अनिश्चित बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यसअघि च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ बाट आउट भएपछि नै रोनाल्डो आफैंले क्लब छाड्न सक्ने वा क्लबले उनलाई कम मूल्यमा बेच्न सक्ने चर्चा एकाएक सुरु भएको थियो । ठूला उपाधि जित्न नसकेपछि रोनाल्डो र युभेन्टस दुवै पक्ष अहिले निराशामा छन् । धेरैले यो सिजनको अन्त्यसँगै नयाँ सिजनमा रोनाल्डो र युभेन्टस सँगै नहुने सम्भावना बलियो मानेका छन् ।
गत राति बेनेभेन्टोसँग पनि पराजित भएर उपाधि होडमा १० अंकले पछि परेपछि लगातार नवौं पटक लिग च्याम्पियन बनेको युभेन्टस थप संकटमा परेको छ । क्लब ठूला प्रतियोगितामा असफल हुनेक्रम बढेपछि रोनाल्डोको भविष्य के होला भन्नेमा धेरैको चासो र चिन्ता छ । धेरैले रोनाल्डो आफैंले क्लब छाड्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् भने कतिपयले क्लबले अब उनलाई मूल्य घटेर भए पनि बेच्ने भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । केही समयअघि मात्रै ३६औं जन्मदिन मनाएका रोनाल्डोको इटालीमा भविष्य के होला ? पछिल्लो समय सरुवा बजारमा रोनाल्डो युभेन्टस छाडेर पूर्वक्लब रियल मड्रिड फर्किन लागेको चर्चा चुलीमा छ ।
बाहिरका अनेक चर्चा, भविष्यवाणी र टिकाटिप्पणीहरू चिर्ने गरी क्लबका खेल निर्देशकले यस विषयमा आधिकारिक धारणा राखेका छन् । गत राति युभेन्टस बेनेभेन्टोसँग पराजित भएपछि मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै खेल निर्देशक फाबियो पारासिटीले रोनाल्डोलाई बेच्ने वा उनले क्लब छाड्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको र रोनाल्डो कम्तीमा पनि आफ्नो सम्झौताभरि युभेन्टसमै रहने स्पष्ट पारे । रोनाल्डोलाई आफूहरूले अझै राख्ने निर्णय गरिसकेको पारासिटीले मिडियालाई बताए । त्यत्ति मात्रै हैन, उनले प्रशिक्षक आन्ड्रेया पिर्लो र रोनाल्डो दुवै नयाँ सिजनमा पनि रहने पनि स्पष्ट पारे ।
‘बाहिर के–के चर्चा छन्, त्यसमा हाम्रो ध्यान छैन । बाहिरका चर्चा हाम्रा आधिकारिक विचार वा योजना होइनन् । सुन्न त हामीले पनि सुनिरहेका छौं । तर, हामीले सोच्दै नसोचेका कुरा बाहिर चलिरहेका छन्,’ पारसिटीले रोनाल्डो र पिर्लोको भविष्यबारे सोधिएको प्रश्नमा भने, ‘क्रिस्टियानोलाई हामीले अझै राख्ने निर्णय गरिसकेका छौं । उनको सम्झौता सकिन्जेल वा सकिएर नयाँ सम्झौता गरेर भए पनि । किनभने, उनी विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन् । र, उनी यहाँ हुँदा हामी खुसी छौं । हामी नयाँ सिजन उनीसहित सुरुआत गर्नेछौं । हामी र उनी अलग हुने कुरा सोचेकै छैनौैं,’ पारासिटीले भने ।
पारासिटीले यो सिजन बाँकी प्रतियोगिता सबै हारे पनि रोनाल्डो नयाँ सिजन पनि टोलीमा रहने स्पष्ट पारेका छन् । ‘युभेन्टस अझै सिरी ए लिग र कोपा इटालियामा सहभागी छ । हामीले यी दुवै प्रतियोगिता हारे पनि क्रिस्टियानो नयाँ सिजन हामीसँग हुनेछन् । यो सिजन कसरी बित्छ वा हामीले के–के जित्छौं भन्ने कुराले यसलाई फरक पार्दैन । बरु, हामी नयाँ सिजनका लागि क्रिस्टियनोसहित नयाँ ढंगले टोली बनाउन गइरहेका छौं । पिर्लो र क्रिस्टियानो नयाँ सिजन हामीसँगै हुनेछन्, यो क्लबको निर्णय र योजना दुवै हो,’ पारासिटीले भने ।
प्रकाशित मिति ९ चैत्र २०७७, सोमबार १२:०५